Saacad Koronto - Wikipedia
Nooc ka mida saacada korontada
Saacad Koronto (, ) waa aalad loo isticmaalo xisaabinta socodka korontada. Mitirka korantada, mitirka korantada, mitirka korantada, ama mitirka tamarta waa qalab lagu cabbiro qadarka tamarta korontada ku shaqeysa deganaansho, ganacsi, ama qalab koronto ku shaqeeya. Adeegyada korontada ee korontada waxay isticmaalaan mitirka korontada ee lagu rakibay goobaha macaamiisha ee loogu talagalay ujrada. Sida caadiga ah waxay ku yaalaan cutubyada biilka, kuwa ugu caansan saacadda kowda saacadood (kWh). Waxay badanaa akhriyaan marxalad kasta oo bilaash ah. Marka kaydka tamarta ee muddooyinka qaarkood la doonayo, mitirrada qaarkood waxay cabbiri karaan baahida, isticmaalka ugu sarreeya ee awoodda wakhti yar. "Waqtiga Maalinta" Qiyaasta waxay u oggolaaneysaa qiimaha korantada in la beddelo inta lagu jiro hal maalin, si loo diiwaan geliyo isticmaalka inta lagu jiro muddooyinka kharashka badan iyo qiima-sarre, qiimaha hoose, muddooyinka. Sidoo kale, meelaha qaarkood metelaadu waxay u gudbinayaan dalabka culeyska culus ee daadinta xiliga lagu jiro xilliga culeyska culus. 
2 Noocyada Saacadaha
Qaybta ugu caansan ee cabbirka mitirka korontada waa saacad kowda [kWh], taas oo la mid ah qadarka tamarta loo isticmaalo kiilo hal kiilo hal saac gudaheed, ama 3,600,000 joules. Qaar ka mid ah shirkadaha korontada waxay isticmaalaan halkii malyuun ee SI Megajoule. Badanaa waxaa lagu qiyaasi karaa watts, laakiin celcelis ahaan mudo ah, inta badan afar jeer ama nus saac. Awoodda jawaab celinta waxaa lagu qiyaasaa "kumanaan wakhti firfircoon" -waxbarasho (kvarh). Marka la gaaro shirarka, "gundhig" ama gaabis ah, sida mootada, waxay yeelan doontaa awood wanaagsan oo firfircoon. "Hogaamiye", ama culays awood leh, waxay lahaan doontaa awood aan fiicnayn. 
Noocyada Saacadaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Volt-amperes waxay cabiraan dhammaan awoodda ay ku maraan shabakad qaybinta, oo ay ka mid yihiin waxqabadka iyo dhabta ah. Tani waxay u dhigantaa badeecada xididada caanka ah iyo cirifka. Badbaadinta tamarta korontada ku jirta waxaa loo qiyaasaa siyaabo badan. Qodobka awoodda ayaa ah saamiga awoodda adkeysiga ah (ama dhabta ah) ilaa volt-amperes. Awoodda awoodda korontada ayaa leh astaamo kor u kaca, iyo culeyska isxobay ayaa leh saameyn awood leh. Gacan si xaraarad leh (sida laydhka filimka, kuleyliyaha ama qaboojiyaha) waxay muujineysaa isugeyn awoodeed 1. Meel-hawleedka hadda jira waa cabiraadda qaabka dalbashada. Tusaale ahaan, culeysyada elektarooniga ah sida qalabka kombiyuuterka ayaa soo jiidan kara tikidhada ugu sarreeya si ay u buuxiyaan walxaha kaydinta gudaha. Tani waxay horseedi kartaa hoos u dhac xoog leh oo udhaxeeya meesha ugu sarreysa ee korontada taas oo muujinaysa sida loo siman yahay dalabka dalxiiska. Tani waxay xoojineysaa isdhexgalka oo aan la aqbalin haddii ay dhaafaan xadka xadidan, maadaama aysan aheyn wax lumis ah, laakiin waxaa laga yaabaa inay farageliyaan howlaha qalab kale. Qalabka Harmonka waxaa sharciyeynaya sharciga EU iyo wadamada kale si ay u dhacaan xuduudaha cayiman. Marka lagu daro cabbiraadda ku saleysan xaddiga tamarta loo isticmaalo, noocyada kale ee cabbiraadda ayaa la heli karaa. Mitirka oo qiyaasay xaddiga kharashka (loona yaqaan 'coulombs') loo isticmaalo, oo loo yaqaan mitirada saacadaha ampere, ayaa loo isticmaalay maalmaha hore ee korontada. Kuwani waxay ku tiirsanaan jireen tamarta joogtada ah ee joogtada ah ee loogu talagalay qiyaasta saxda ah ee isticmaalka tamarta, taas oo aan ku dhicin xaalad ahaan inta badan sahayda. Arjiga ugu caansan wuxuu la xiriiraa mitir gaar ah si loo kormeero xaalada / dheecaanka bateriga waaweyn. Mitirka qaar ayaa qiyaastay dhererka wakhtigaas oo shidaalku dillaacay, iyada oo aan la cabbirin baaxadda culeyska ama hadda la sameeyay. Kuwani waxay ku habboon yihiin codsiyada joogtada ah oo aan marar dhif ah loo adeegsan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Saacad_Koronto&oldid=201740"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Juun 2020, marka ee eheed 17:47.